Shina Ny orinasa sy ny mpamatsy 126 Shenghang
Trano vy vita amin'ny maivana
Birao simenitra Magnesium Oxide
Birao fototra anatiny / ivelany
Birao haingon-trano MGO
Board of Acoustic MGO
MGO Glazed Sheofing Roofing Sheets
PET Membrane MGO Fampitaovana Roofing
Aluminum Foil MGO Roofing Sheets
Ny Foara Kantone 126 any
Ny lanja famandrihana 126th dia hotanterahina ny 15 Oktobra hatramin'ny 19 Oktobra 2019. Hisy mpanjifa vaovao sy antitra rehetra avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao amin'ny laoniny. Hankany amin'ny booth samihafa izy ireo hitady ny vokatra ilainy ary hahatratra ny fiaraha-miasa amin'ny alàlan'ny fifandraisana an-tsipiriany.
Nahita ny lanonana ara-potoana Kantonne 126. Tena faly izahay mifankahita amin'ireo namana vaovao sy taloha rehetra eto. Te hisaotra anao rehetra noho ny fanantenanao sy ny fanohananay ny vokatra magnesium oxide "Iron Crown" izahay.
Ho an'ity fampirantiana ity, ny fampirantiana lehibe dia misy: Fototry ny fanamafisana avo be Magnesium Oxide, Biraon'ny Magnesium Oxide, Biraon'ny fanamoriana Fireproof, board simenitra Fiber Light Light Structure House ary rafitra fananganana CL.
Tao amin'ny tranoheva dia nampahafantarinay tamin'ny antsipirihany ny zava-bitan'ny vokatra sy ny tombony amin'ny vokatra isan-karazany, ary koa ny takelaka fampiharana amin'ny vokatra isaky ny tetik'asa fananganana, mba hahafahan'ny mpanjifa mahatakatra bebe kokoa momba ireo vokatra.Amongany, maro ireo mpanjifa liana amin'ny magnesium antsika oxide fitaovana fiarovana ny tontolo iainana. Izy ireo dia manana ny fahazoana antsipirihany momba ireo vokatra ao amin'ny tranoheva ary manamafy fa ny fitaovam-panamboarana oksizenina magnesium dia azo ampiasaina ao amin'ny varotra na ny tetik'asa. Raha izany dia, orinasa mihoatra ny 5 no nanao sonia ny fifanarahana miaraka aminay ary manantena ny hananganana fiaraha-miasa maharitra mandritra ny ny ho avy.
Ho an'ireo mpanjifa taloha dia niresaka momba ny firoboroboan'ny fivoarana, ny tombony ho an'ny tsena sy ny fomba fampiroboroboana ny vokatra magnesium oxide, ary nifandray tamin'ny mpanjifa momba ny drafi-fiaraha-miasa manaraka sy ny fomba fampandrosoana fampandrosoana.
ny dianay, mpitarika, fanodinana, vokatra
Vokatra vaovao — Ilay fanesorana tsy fanesorana ...
IBS 2020 - 2020 NAHB Iraisam-pirenena ...
Address: Rm1419 Gelan Business No.256 Xisanzhuang Street Shijiazhuang Hebei China
© Copyright - 2010-2019: Zo rehetra voatokana. Tips - Hot Products - Sitemap - AMP Mobile
Sampam-by vy vita amin'ny vy, Tady fandrefesana, Taratasy vita amin'ny famononam-bary any Galvalume, Sheet vy voakorontana, Mpitety tafo fanala, Sheet plastika vita amin'ny plastika,